Home Wararka Jihaynta waxbarashada Soomaaliya oo heshiis wadajira laga gaaray
Jihaynta waxbarashada Soomaaliya oo heshiis wadajira laga gaaray
Waxaa maanta heshiis laga gaaray khilaafka jihaynta waxbarashada Soomalaiya. Wasaaradda Waxbarashada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Wasaaradaha Waxbarashada heer dowlad goboleed, oo uu weheliyo maamulka Gobolka Banaadir, ayaa xalay si wadajir ah Garoowe uga dhawaaqay guddi wada-tashi oo qaabilsan horumarinta arrimaha Waxbarashada dalka.
Sida War-murtiyeed ka soo baxay dowlada Goboleedyada iyo dowlada dhexe lagu sheegay, Guddigan ayaa la shaaciyay, kadib shir ku saabsan arrimaha Waxbarashada dalka oo shalay ka qabsoomay magaalada Garoowe, kaas oo dhexmaray wasaaradda Waxbarashada heer Federaal iyo heer dowlad goboleed oo uu weheliyo Gobolka Banaadir.
War-murtiyeed ka soo baxay shirka ayaa lagu sheegay in sidoo kale lagu heshiiyay in la mideeyo qalfoofka manhajka wasaaradda Waxbarashada heer Federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed, gaar ahaanna kan Puntland oo hore khilaaf kala dhexeeyay dowladda Federaalka.
Sidoo kale, waxa lagu heshiiyay in la dhiso guddi ka kooban dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaas oo qaabilsan Imtixaanaadka Shahaadiga ah ee dalka, si dalka oo dhan looga qaado imtixaan midaysan.
Halkaan ka akhriso War-murtiyeedka oo dhan